Enwere m ike isutu nna m gbara ọgwụ mgbochi? Na ajụjụ ndị ọzọ; ebe a bụ ụfọdụ azịza - TELES Relay
Enwere m ike isutu nna m gbara ọgwụ mgbochi? Na ajụjụ ndị ọzọ; ebe a bụ ụfọdụ azịza
Ọhụrụ mkpọchi mkpọchi ugbu a dị na England na ọtụtụ Scotland, yana Wales na Northern Ireland.
Covid-19: edemede nke obi ojoo mgbe Chan 2021 gasịrị?
Covid-19: a chọpụtara ihe dị iche na South Africa na New Zealand
Ndị a bụ ụfọdụ ajụjụ gị gbasara iwepụ ọgwụ mgbochi, iwu njem mba ụwa ọhụrụ, yana mmechi ụlọ akwụkwọ.
Ajuju na ajuju
Ntinye nke ogwu
A gbara nna m afọ 89 ọgwụ mgbochi otu izu gara aga. Ọ dị mma ịnabata ya ugbu a?Site na Cheryle Locke
Michelle robertsNchịkọta Ahụike na Onlinentanetị
Ọ bụrụ na a gbaa mmadụ ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ ka ga na-agbasoriri iwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya ichebe onwe ha na ndị ọzọ.
N'ezie, enweghị ọgwụ mgbochi ọ bụla dị irè 100%, ọ dobeghị anya ma ịgba ọgwụ mgbochi ọ ga-egbochi ndị mmadụ ịnwụ na ịgbasa coronavirus, ọbụlagodi na ọ na-echebe megide ọrịa siri ike na ọnwụ.
E kwesịkwara icheta na ọ na-ewe izu ole na ole mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ahụ tupu echedo gị. Maka ọgwụ ogwu Covid dị ugbu a na UK, usoro ọgwụ abụọ, agbatịpụrụ ọtụtụ izu iche, na-atụ aro ka ịnye nchebe kacha mma.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na inweela kpụrụ nkwado afụ gị na nna gị, gị na ya nwere ike ịkpachi anya.
Ọ bụ eziokwu na ogwu mgbochi nwere ike imetụta ọmụmụ?Site na Patricia, Weston-Super-Mare
Ndị ọkachamara kwuru na enweghị ihe akaebe na ogwu ahụ na-emetụta ọmụmụ.
Ndị na-ezube ịtụrụ ime adịghị mkpa iji zere afọ ime mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Mgba ogwu a ọ ga - adịgide ndụ gị niile ka ị ga - achọ ọgwụ mgbochi ọ bụla n'ime ọnwa iri na abụọ, dịka ọkụ ọkụ?Site na Robert Parker, Warwickshire
O dobeghị anya ogologo oge ọgụ ahụ nwere ike ịdịru mgbe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Enwere ike ịgba ndị mmadụ ọgwụ mgbochi otu ugboro n'afọ ma ọ bụ afọ ole na ole ọ bụla ka echekwa ha.
Ọ dị mma na m ga-anara ogwu ahụ ma ọ bụrụ na enwere m nfụkasị na penisilini?Site na James, Bristol
Eeh. Edepụtaghị ọrịa ntụtụ Penicillin dị ka ihe kpatara ahụike iji zere ịnwe ọgwụ Pfizer-BioNTech ma ọ bụ AstraZeneca-Oxford Covid-19.
Agbanyeghị, mgbe a jụrụ gị maka ọgwụ mgbochi Covid gị, ị ga-ekwurita banyere ndị nrịanrịa gị na ndị ọrụ ahụike iji jide n'aka na ọ nweghị ihe ọzọ kpatara iji zere ya.
E tinyeghị ndị na-adịghị ike dị afọ 65 ruo 70 na usoro ịgba ọgwụ mgbochi nke mbụ. Anyi ga - enwe ogwu mgbe ndi otu mbu?Site na Ian Cross, Watford
Ọgwụ mgbochi izizi nyere ndị kachasị ike ngwangwa , dị ka egosiri na ndepụta nke otu itoolu kachasị mkpa, na-ekpuchi ihe dị ka nde mmadụ 30 na UK.
Ndị bi n'ụlọ ndị nọọsụ, ndị na-elekọta ha na ndị ọrụ NHS ndị ọzọ na-eduga n'ahịrị ahụ.
Ndị gbara afọ 70 ma ọ bụ karịa, yana ndị na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa (afọ niile) ga-agbata ọgwụ mgbochi n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị na ngwa ngwa o kwere mee.
A ga-enyocha ndị otu ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka coronavirus oge niile ka ọ ghara ibunye ndị ha na-echebe?Site n'aka Ivan Young, Romsey, Hants
Ndị na-enye ọgwụ mgbochi ga-ebu akụrụngwa nchekwa onwe gị (PPE) kwesịrị ekwesị iji nyere aka igbochi mgbasa nke nje ahụ.
Fọdụ ga-abụbu ọgwụ mgbochi onwe ha, n'ihi ọrụ ha dị ka ndị na-enye ahụike.
Ọgwụgwụ nke ọgwụ mgbochi
Iwu njem kachasị ọhụrụ
Enwere m ike ịla ụlọ maka ịgba ọgwụ mgbochi m? Anọ m na mpaghara dị iche iche na afụ nkwado m, mana edebara aha m na GP ọzọ.Site na Ida, Southend-on-Sea, Essex
Ee, ị nwere ike.
England niile na ọtụtụ akụkụ nke UK bụ emechila ugbu a na ndị mmadụ kwesịrị ịnọ n'ụlọ.
Agbanyeghị, a na-ahapụ gị ka ị gaa oge nlekọta ahụike.
Anọ m ugbu a na Gran Canaria Spain ma na-eme atụmatụ ịlaghachi ụlọ (London) gburugburu February 26th. Achọrọ m nyocha PCR?Site na M Rad, London
Kwesịrị igosi ihe akaebe nke ule coronavirus na-adịbeghị anya tupu ị pụọ, ọ bụrụ na iwu ọhụrụ ahụ ka dị, mana Secretary Transportgbọ njem Grant Shapps ekwuola na a ga-anabata ọtụtụ ụdị ule.
Site n’izu na-abịa, ndị njem na UK ga-egosi na mbido njem ha na ha anwalela ihe ọjọọ maka coronavirus ihe na-erughị awa 72 tupu oge eruo.
A na-ahụta ule PCR dị ka "ọkọlọtọ ọla edo" n'ihi oke ogo ha ziri ezi, mana a ga-enyocha nsonaazụ ya na ụlọ nyocha, nke pụtara na ha nwere ike iwe otu ụbọchị ma ọ bụ karịa ịlaghachi.
Gọọmentị tụrụ aro na a ga-anabatakwa ule na-aga ngwa ngwa. Ndị a na-adị ngwa ngwa ma na-adịkarị mfe inweta karịa ule PCR, na-enyefe nsonaazụ n'ime ọkara elekere.
Imirikiti ndị bịarutere UK - gụnyere ndị si Spain - ga-abụ ndị a kpọpụrụ iche na mbata maka ụbọchị 10. Nwere ike belata oge ịnọpụ iche nke onwe gị ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ maka ule mgbe ụbọchị ise gachara, ọ ga-alaghachi azụ.
Anọ m ugbu a na Norway. Flightgbọ elu m laghachiri Aberdeen bụ Jenụwarị 12th. Abum onye bi na ebe a, di m bu onye Norway. Gịnị bụ ọnọdụ nke mbata?Site n'aka Dahliah Aziz, Aberdeen
Site n’izu na-abịa (ụbọchị a ga-akwadoro ya) a na-ewebata iwu ọhụụ maka ndị njem na-abata UK.
Tupu ịbanye ụgbọ elu gị na Norway, ọ ga-adị mkpa ka ị gosipụta nsonaazụ na-adịghị mma site na nnwale coronavirus na nso nso a. Nke a gụnyere ụmụ amaala Britain.
Na Scotland, a ga-ewebata usoro a "ozugbo enwere ike".
A gaghị ekwe ka onye ọ bụla nwale ihe ọma maka coronavirus ịga njem. Border Force ga-eme nyocha nke ndị bịarutere UK na ndị na-anaghị agbaso ọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke ga-akwụ ezigbo of 500.
Peoplefọdụ ndị mmadụ agaghị agụ ụgwọ site na nyocha achọrọ, gụnyere ndị nọ n'okpuru afọ 11, ndị na-ebu ya, na ndị mmadụ na-abịa site na njem njem nkịtị ma ọ bụ mba ndị na-enweghị akụrụngwa iji nwalee - enwere obere ikekwe nke a gụnyere Norway.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-esite na Norway ekwesịghị ịnọrọ onwe ha. Ma Scotland na ndị ọzọ nke UK nọ n'okpuru mkpọchi mba, nke pụtara na ị ga-eme njem ndị dị mkpa mgbe ị rutere.
Nke a bụ otu esi enyere enyi aka ịpụ na mmekọrịta ọjọọ
Njedebe nke iwu njem ikpeazụ
Schoollọ akwụkwọ na mahadum mechiri
Gini mere na gọọmentị agaghị ekpebi ịhapụ ụmụ akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ niile otu afọ ka onye ọ bụla ghara ịhapụ agụmakwụkwọ ha?Site n'aka Anne Ellioy, Iver
Ighaghachi otu afọ n'ụlọ akwụkwọ abụghị ihe a nwalere na UK, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na US na mba ndị ọzọ.
N'ikwu okwu na June, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ kwuru na ọ bụ ndị isi ụlọ akwụkwọ ga-ekpebi otu esi azụ ụmụ akwụkwọ. "Nke a nwere ike, n'oge ụfọdụ, tinye mkpebi iji kpebie na a ga-agụrịrị nwata na afọ ole na-abụghị nke egosiri na afọ ya." Ọ gbakwụnyere, sị: "Mkpebi ndị dị otú ahụ kwesịrị ịdabere n'ezi ihe mmụta na n'ịgwa ndị nne na nna."
Agbanyeghị, edoghị anya ma atụmatụ a ọ na-arụ ọrụ. Nnyocha ndị nyocha nke Mahadum Durham chọpụtara na ụmụ akwụkwọ mere otu afọ nwere ike ime ka ọnwa anọ belata karịa karịa ma ọ bụrụ na ha mere onye ọ bụla afọ.
Na mgbakwunye, ụgwọ ijigide nwata akwụkwọ otu afọ dị oke ọnụ - ihe ruru £ 6000, ihe karịrị ego ọ ga-eri, iji maa atụ, iji nye ụmụ akwụkwọ nsogbu nsogbu.
Nwa m nwanyị chọrọ ịlaghachi mahadum, usoro a dị n'ịntanetị ruo February ma a na-akwụ ụgwọ klas ya. O kwere ka ọ lọghachi?Site na Jennifer Carter, Bath
Ọ dabere na ebe mahadum gị dị na UK. N'England, ọ dịghị ihe doro anya na-egbochi nwa gị nwanyị ịlaghachi na paseeji ya, ọ bụrụhaala na ọ nwalebeghị ezigbo coronavirus ma ọ bụ na-anọrọ onwe ya. Okwesighi iga njem ma oburu na o na egosi ihe coronavirus.
Ọ gwụla ma ha esoro ụfọdụ usoro ọmụmụ dị ka ọgwụ ma ọ bụ dentistry , a gbara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kọleji ume ka ha "nọrọ ebe ha nọ ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume" ruo oge ọbụlagodi etiti ọnwa Febụwarị ma bido oge ha n'ịntanetị.
Studentsmụ akwụkwọ na-alaghachi n'ụlọ obibi mahadum ha kwesiri ịnwale ule ugboro abụọ na nloghachi ha ma ọ bụ kewapụta onwe ha maka ụbọchị 10, dịka gọọmentị si kwuo.
Ntuziaka agụmakwụkwọ ka elu maka England na-ekwu na mmachibido iwu ịgagharị "ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa", gụnyere etolite ezi ulo ohuru ma banye ulo obibi ma obu ulo ulo akwukwo , ma ọ dọrọ aka na ntị na ezinụlọ na-akpụ akpụ na-eburu ihe ize ndụ dị ukwuu nke nnyefe.
Gọọmentị Scotland kwuru nke ahụ nwata akwukwo nloghachi ekwesiri imeputa ya na ndi oru na umu akwukwo, ma ndi rutere ka ha gha agha.
A na-ekwe ka ụmụ akwụkwọ gaa Wales site na ebe ọ bụla na UK ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịmaliteghachi ọmụmụ ihe ha. Otú ọ dị, Gọọmentị Wales kwuru na Mụ akwụkwọ ekwesịghị ịlaghachi ruo mgbe mahadum ha nyere ha iwu ka ha mee ya, mgbe mmụta nkeonwe bidoro.
Njedebe nke ụlọ akwụkwọ na mahadum
Enwere m ike ịga soro ndị enyi gagharịa?Site n'aka David Girling, Portishead
Na England, Scotland na Northern Ireland ị nwere ike soro enyi gị jee ije - mana ọbụghị soro otu.
A na-ekwe ka emega ahụ onye na-abụghị ezinụlọ gị ma ọ bụ nkwupụta nkwado , n'èzí n'èzí (dịka ọmụmaatụ, ogige, osimiri ma ọ bụ n'ime ime obodo).
Naanị otu onye ị ga-emega ahụ n’otu oge, ma ị gaghị emega ahụ otu ugboro kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, ị gaghị agagharị na mpụga mpaghara gị.
Na Wales anaghị ekwe gị soro onye ọ bụla nọ na mpụga ụlọ gị ma ọ bụ kwado afụ.
A na-ekwe ka ndị nne ma ọ bụ nna nanị ha na-azụ ụmụ nweta nkwado egosipụta? Nke a ekpuchighị na ọkwa Mịnịsta Ala.Site na Liz, Sheffield
E kwughi okwu nkwado Nkwupụta na mkpọchi mkpọchi Mịnịsta Ala, mana iwu agbanwebeghị.
Nwere ike ịmepụta nkwado afụ gị na ezinụlọ ọzọ nke otu ọ bụla ma ọ bụrụ na ị bụ otu okenye toro eto biri otu ma ọ bụ karịa ụmụaka n'okpuru afọ 18 na June 12, 2020.
Dị ka nne ma ọ bụ nna, ị nwekwara ike ịmalite nkwado nkwado ma ọ bụrụ na ezinụlọ gị gụnyere nwatakịrị nke ka dị n'okpuru otu afọ na Disemba 2, 2020, ma ọ bụ nwatakịrị nwere nkwarụ chọrọ nlekọta na-aga n'ihu ma ọ dị n'okpuru afọ ise.
Enwere ike ịkọwa afụ nkwado site na ibi naanị (ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ndị na-elekọta gị bịara leta gị iji nyere gị aka), ma ọ bụ ọ bụrụ na ị bụ naanị okenye nọ n'ụlọ gị na-achọghị mkpa nlekọta na-aga n'ihu n'ihi nkwarụ.
Not gaghị etolite otu ihu nkwado ya na ezinụlọ gị nke bụ akụkụ nke nkwado ọzọ.
Nne m meworo agadi bụ afụ nkwado m mana ọ naghị ebi na mpaghara (ihe dịka nkeji 90 n'ụgbọala). A ka kwere ka m gaa hụ ya?Site n'aka Tina Howson, Leicester
Onweghi ihe na - egbochi gị isonye nne gị ịna - akwado gị. Ọ bụ ezie na ozi bụ isi nke mkpọchi ọhụrụ bụ na mmadụ niile kwesịrị ịnọ n'ụlọ ha ebe ọ bụla enwere ike, ntuziaka gọọmentị na-ekwu na a ga-ahapụ gị ịhapụ ụlọ gị wee gaa ileta nkwado nkwado gị (ma gafee abalị na ha).
Agbanyeghị, ọ dị mkpa ịgbaso ntuziaka mgbe ị na-apụ n'ụlọ, nke gụnyere ịhapụ ndị ọzọ na ịghara ịnọ onye ọ bụla na-abụghị mama gị.
Mgbe ị na-akwọ ụgbọala ịhụ ya, ịnweghị ike ịkọrọ ndị ọzọ n'èzí ụlọ gị ụgbọ ala gị.
Abụ m nọọsụ na di m na-agbake n'ọrịa cancer ọbara. Toga ọrụ pụtara itinye ndụ gị n'ihe egwu. Enwere m ike ịnọ na ezumike?Site na Lisha, Fareham
Ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ tozuru oke, ịnwere ike ịjụ ha ma ị ga-erite uru na mmemme gọọmentị nke ịnọgide na-arụ ọrụ megide coronavirus .
Mgbe ị na-ahapụ ezumike, ị ga-enweta 80% nke ụgwọ gị oge niile ruru maximum 2500 kwa ọnwa.
Gọọmentị ekwuola na ndị ọrụ kwesịrị ilekọta ndị tụkwasịrị ha obi nwere ike irite uru na atụmatụ a.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ maka NHS, ebe ọtụtụ ndị ọrụ na-erughị eru maka mmemme ezumike, ị ga-agwa onye were gị n’ọrụ okwu. A dụrụ ndị ọrụ NHS ọdụ ka ha bụrụ ndị na-akwado ma na-agbanwe dịka o kwere mee nye ndị ọrụ nwere nkwa na-elekọta ha.
Zoo azịza a
Adị m 77 afọ, m kwesịrị ịnọ?Site n'aka Maureen Watkins, Sheffield
Azịza ya dị nkenke bụ na anyị niile kwesịrị ịnọ n’ụlọ ma hapụ naanị maka ọtụtụ ebumnuche, dịka ọrụ ma ọ bụ ọrụ enweghị ike ịrụ n’ụlọ.
Ọ bụrụ na a na-ahụta gị dị ka onye na-enweghị ike ịgwọ ọrịa, ekwesịrị ka echedo gị ma pụọ ​​naanị maka nhọpụta ahụike, mgbatị, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Gọọmentị amalitela ndepụta nke ọnọdụ nke ga - eme ka mmadụ nwee oke ngwangwa . GP gị nwekwara ike ịgbakwunye gị na ndepụta nke ndị ọrịa echedoro ma ọ bụrụ na ha chere na ị nọ n'ihe ize ndụ ka ukwuu maka ọrịa siri ike.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ahụ siri gị ike, afọ ndụ gị na nke ya abụghị ihe kpatara iji chebe onwe gị.
Ọgwụgwụ nke mmechi oyi
Ọhụrụ ụdị nje
Ajuju ndi ozo banyere ogwu ogwu
NHS Covid nsuso ngwa
Ihe niile gbasara coronavirus
Chedo onwe m ma chebe ndị ọzọ
Mụ na ezinụlọ m
Nwere ike ịkọwa etu esi agbanwe ụdị ọhụụ nke Covid virus? Kedu ihe nke a pụtara kpọmkwem?
Gịnị kpatara nje a ji agbasa ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị na-akwọ aka mgbe niile?
Kedu ka ndị ọrụ si amata na ogwu mgbochi ha na-enye gị agwụbeghị n'ihi nchekwa na-ezighi ezi?
Ọ dị mma maka ụmụ nwanyị dị ime na ụmụ ha inweta ọgwụ mgbochi ahụ?
Kedu ka anyị ga-esi jide n'aka na ọgwụ mgbochi adịghị mma n'oge obere ikpe ikpe a?
Mgbe nchikota ogwu malitere site na 1 nke mbu, ndi mmadu a gha enweta ogwu ogwu?
Ọgwụ mgbochi ahụ ọ bụ iwu?
Ruo ole mgbe ka ọgụ ahụ ga-adị otu oge ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa?
Kedu ihe ndị mmadụ kwesịrị ịme mgbe ha natachara ọgwụ mgbochi coronavirus? Gaa n'ihu ndụ dị ka ọ dị na mbụ, yikwasị ihe nkpuchi, kwanyere iwu nke ịkpapụ anya?
Ogwu Oxford ọ dabara maka ndị nwere sistemu ọgụ na-adịghị ike, dịka ndị nnabata transplant?
Ọgwụ ogwu Oxford AstraZeneca ọ dị mma ma ọ bụ karịa karịa ọgwụ mgbochi Pfizer na Moderna?
Di m na-arịa àkwá, ọ na-enweghịkwa ike ịgba ahụ́ ọkụ n’ihi na ha na-eji àkwá eto ọgwụ mgbochi. Ọ bụ otu ihe na ọgwụ mgbochi COVID-19?
Ọ bara uru ị takeụ ọgwụ mgbochi Oxford n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ nke ọma?
M ga-enwe ike ịhọrọ ọgwụ mgbochi nke m ga-anata?
Ogwu Moderna nwere mgbochi na nkesa nkesa yiri nke ogwu Pfizer?
Ọ bụrụ na ogwu mgbochi ahụ na-aga nke ọma ma ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa amalite, kedu ka m ga - esi mara ma ndị gbara m gburugburu n’ebe ọha na eze agba ọgwụ mgbochi?
Kedu ihe dị iche na ọgwụgwọ nwere obere ihe egwu nke ịrịa ọrịa na ọgwụ mgbochi nke naanị 90% na-arụ ọrụ?
Ana m eche ọnwa abụọ maka ọrịa kansa anụ ahụ. Usoro ịgba ọgwụ mgbochi Covid 19 ọ pụtara na m na-eche ogologo oge?
Ọ bụrụ na ogwu ahụ agaghị abụ iwu, ọ ga - ekwe omume maka ụlọ ọrụ iji mee ka ịgba ọgwụ mgbochi bụrụ ọnọdụ ịbanye?
Nyere na ọgwụ mgbochi Pfizer / BioNtech ga-echekwa na oke oyi, ọ ga-enwe nnukwu ihe ịma aka na nke a?
Mgba ogwu ohuru a ọ ga - echebe megide Covid muted site mink?
Ọgwụgwụ nke ajụjụ ndị ọzọ gbasara ọgwụ mgbochi
Ugbu a, ngwa nyocha NHS chọrọ IOS13.5 ma ọ bụ karịa ka arụnyere, yabụ ọ dakọghị na ekwentị ndị okenye. Enwere ọrụ dị gburugburu?
Mụ na nwunye m bi ugbu a ruo mgbe m lara ezumike nká. M bi na Cumbria, ọ bi na Fort William. Kedu atụmatụ nke izu nke m kwesịrị iji?
Enwere m ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma lelee akụkọ BBC na ngwa NHS ọhụrụ na koodu QR. Ebee ka m ga-esi nweta QR code?
Enwere m ihe enyemaka na-ejikọ na ekwentị m site na Bluetooth, nke a ọ ga-emetụta etu ngwa ahụ si arụ ọrụ?
Ọgwụgwụ nke NHS Covid ngwa nyocha
Kedu ihe bụ coronavirus?Kasị rịọrọ
Ozugbo ị nwere coronavirus, ị ga-alụso ọrịa ọgụ?Kasị rịọrọ
Kedu ihe bụ oge incubation nke coronavirus?
Coronavirus a na - efe efe karịa flu?
Ogologo oge ole ka ị ga-arịa ọrịa?
A na-ahụta ndị na - enweghị ọrịa “dị ka ndị na - agbasa agbasa” - kedu oke ọnụọgụ ndị mmadụ na - eme atụmatụ ma kedu ka ị ga - esi chọta ha?
Kedu ihe kpatara na ndị ọrịa mamịrị anaghị esonye na ndị ọrịa na-arịa ọrịa na-enweghị nsogbu ma a ga-emelite ndepụta ahụ?
Kedu ka o si dị ize ndụ coronavirus maka ndị nwere ọrịa ashma?
Ndi ndị nwere nkwarụ ahụike siri ike nọ n'ihe ize ndụ nke coronavirus?
Ndi mmadu oyibo ga-enweta oria coronavirus dicha mfe?
Ebe ezigbo ndị ọrụ na-eyiri ihe mkpuchi ihu, olee otú ndị ntị chiri na-agụ egbugbere ọnụ kwesịrị isi ghọta ihe a na-ekwu?
Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na onye mụ na ya bi anọpụ iche?
Ndi mmadu kwesiri ikwusi inwe mmeko?
Adị m ime ọnwa ise ma chọọ ịghọta ihe ọghọm dị na nwata ma ọ bụrụ na ebute m ọrịa?
Ana m enye nwa ara m ọnwa ise ara - gịnị ka m ga - eme ma ọ bụrụ na m jide coronavirus?
Ọ nwere ike ịnweta coronavirus site na nkịta anụ ụlọ ma ọ bụ nwamba?
Akwụsị mụ na ezinụlọ m
A na m arụrụ onwe m. Enwere m ike ịnweta uru ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịrụ ọrụ n'ihi nje ahụ?
Onye ruru eru inweta otuto zuru ụwa ọnụ?
Ọ bụrụ na ị ga-anọrọ onwe gị, ị ga-enweta ụgwọ ọnwa anaghị akwụ ụgwọ ka ọ bụ onye were gị n'ọrụ ga-akwụ ụgwọ ọrụ gị?
Kedu ihe bụ ohere m nke inweta ọrụ kpochidere / mgbe mkpọchi ahụ gafere
Enwere m ike ịga Ireland wee gaa mba ọzọ wee laghachi UK site na Ireland iji zere ichepụ iche?
Okwesiri ka ewepu ndi oru puru iche?
A ga-akpọpụkwa ndị mụ na ha bi n'ụlọ n'ihi m?
Ọ bụrụ na achọrọ m iche iche mgbe ezumike gachara, anaghịkwa m arụ ọrụ n’ụlọ, a ga-akwụ m ụgwọ?
Ọgwụgwụ nke kwarantaini
Zitere anyị ajụjụ gị
Edemede a pụtara izizi na: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51176409
Amanpour jụrụ Chalamet banyere Woody Allen - Video
Covid-19: Gabon na-egbochi mmachi na ihu ịlaghachi azụ na mmetọ
Kedu otu esi ewepu mkpọchi echefuru na uwe? - AHUIKE ...
"Gọọmentị Senegal ga-enyere ya aka ịmaliteghachi ndụ nkịtị" ...
Top 10 akwụkwọ ikike kacha ike n'Africa na 2021
onye bu Nour-Eddine Mekri, onye isi isi ohuru ...
Jean-Marc Berthon, Louise Mushikiwabo onye isi ndị ọrụ,…
Scandal na Tanzania: Maman Dangote, na-ekpughe aha ezigbo ...
akụkọ banyere ntị nke Nouria Benghabrit, onye bụbu minista ...
Echetara akwukwo nri a n'ihi na o nwere ike buru ihe ojoo ...
Site na 'Agụụ Agụụ' na Vermont Grandpa -…
Ndị sayensị achọpụtala ụzọ ọhụrụ dị ịtụnanya ...
Booba wakporo Gims n'ike: “Gims na anyị ahụghị gị n'anya! Gị…
E jidere Chris Brown na nsogbu dị egwu na LAPD - Video
Onyinye ikpeazụ sitere na ụda nye onye billionaire Israel? - Na-eto eto…
Na Mbụ Osote 1 nke 54